ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာစုနှစ်ခရီး - MYANMORE+
Home News & Features ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာစုနှစ်ခရီး
သင်သိပါသလား။ ၂၀၂၀ကျရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁၀၀ပြည့်ပြီဆိုတာ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၉နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုမဖွင့်လှစ်ခင်က မြန်မာကျောင်းသားတွေဟာ တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာသင်ချင်ရင် ကာလကတ္တားနဲ့လန်ဒန်ကိုသွားကြရတယ်။
ဗြိတိသျှတွေဟာမြို့ထဲနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားကန် (အခု အင်းလျားကန်) နဲ့ ပရုံးလမ်း (အခု ပြည်လမ်း) တို့ကြားမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီနေရာက ကျောင်းသားတွေစုပြီးသပိတ်မှောက်ခဲ့ရင် အစိုးရအတွက်ထိန်းသိမ်းရလည်းလွယ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မြန်မာကျောင်းသားတွေကတော့ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာအထက်တန်းစားတွေကိုဦးစားပေးလွန်းတယ်၊ သာမန်လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူတွေအနားမကပ်နိုင်အောင်ဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သင်ရိုးတွေကလည်း ဗြိတိသျှကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ရေးဆွဲထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ကျောင်းသားအများစုကသပိတ်မှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားမှာစုဝေးခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာဗမာစာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိကထားသင်တဲ့အမျိုးသားကျောင်းတွေဖွဲ့စည်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ အခု ဒဂုံ (၂) ကျောင်းဟာတချိန်က မြို့မအမျိုးသားပညာရေး အထက်တန်းကျောင်းပါ။
အမျိုးသားကျောင်းတွေစတည်ထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနတဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေရဲ့မြစ်ဖျားခံရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။
၁၉၂၀၀န်းကျင်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကနေ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒီသခင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဗြိတိသျှတွေကိုဦးဆောင်တော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ အာရှမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် G H Luce၊ ဘာသာဗေဒပညာရှင် ဦးဖေမောင်တင်၊ ဘောဂဗေဒပညာရှင် J S Furnivall တို့လိုပါမောက္ခတွေ သင်ကြားပေးရာတက္ကသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၃၆ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ သမဂ္ဂအဆောက်အအုံရှေ့တွင် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေစဉ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၊ စာနယ်ဇင်းလောကထဲကထင်ရှားသူ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်၊ ကဗျာဆရာမင်းသုဝဏ်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပညာရေသောက်စို့ရာနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအဆောက်အဦကတော့ ၁၉၂၇ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ စာပေနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်မှာလည်း ထင်ရှားပြီး သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ဆရာမ မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ဝတ္ထုတွေကနေ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ဂျပ်ဆင်ထိပ်ကလရိပ်ပြာသီချင်းအထိတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့သမိုင်း နှစ် ၁၀၀ အတွင်းထင်ရှားတဲ့ဇာတ်ကောင်တကောင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၅ အောက်တိုဘာ ၂၄ မှာ ဂျပန်ဗိုလ်ချုပ် Heitaro Kimura ဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပဲ မဟာမိတ်တပ်တွေကိုလက်နက်ချကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်စစ်သားများရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ မဟာမိတ်တပ်များထံလက်နက်ချစဉ် (၁၉၄၅)။
၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့စစ်သားတွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲဝင်ရောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ကျောင်းသားထုကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျားဆောင်က ကျောင်းသူတွေဟာတက္ကသိုလ်အ၀င်ဝမှာ စစ်သားတွေကိုနာမ်နှိမ်တဲ့အနေနဲ့ ထဘီတွေကိုလှမ်းထားခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ကျောင်းသားများစွာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တနေ့မနက်မှာပဲ ကျောင်းသားတချို့ပုန်းခိုနေတဲ့သမဂ္ဂအဆောက်အအုံဟာ ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဟာအစိုးရလက်အောက်ရောက်သွားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သင်ကြားနေရာကနေ မြန်မာဘာသာအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ ဘာသာစကားပြောင်းလဲတာပြဿနာမရှိပေမယ့် ပညာရေးအသုံးစရိတ်လျှော့ချလိုက်တာကတော့ သိသာတဲ့ထိုးနှက်ချက်တခုလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။
၁၉၇၄မှာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို အစိုးရကကြံတောသင်္ချိုင်းမှာမြှုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတချို့က လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
ဒီကျောင်းသားတွေဟာဦးသန့်ရဲ့အခေါင်းကိုခိုးယူပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရဲ့ရှေ့မှာမြှုပ်နှံခဲ့တယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ဈာပနကိုလည်းနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။
ကျန်ရစ်သူမိသားစုရဲ့တောင်းဆိုချက်အရရုပ်ကလပ်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ်ကျောင်းသားအုပ်စုတစုကထပ်ခိုးသွားပြီး ယခင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ နေရာမှာဂူသွင်းသဂြိုဟ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါဟာအစိုးရကိုအာခံတဲ့အပြုအမူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်လူစုခွဲပြီး ကန်တောင်မင်အမှတ်တရပန်းခြံ (Kandawmin Mausolea) မှာမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ ကျောင်းသားသပိတ်ရောက်တော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့ပြန်တယ်။ ၁၉၉၀၀န်းကျင်ခုနှစ်တွေမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ပြီး ကျောင်းသားတွေဟာတခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြရပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတို့သွေးမစွန်းထင်းခဲ့တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘာရက်အိုဘားမားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး သူပြောတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာရာစုနှစ်တခုအတွင်း “မြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုရာမြေ” လို့တင်စားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီး ကျောင်းသားသစ်တွေနဲ့စည်ကားလာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမြင့်တက်လာခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂသစ်လည်းပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရှေ့ကနောင်တော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ခြေရာလိုက်လို့ မတရားမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ အသစ်တဖန်နိုးထလာတဲ့ တက္ကသိုလ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေဆဲပါ။ မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှာ နှစ် ၁၀၀ တိတိမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ နောက်ထပ်နှစ် ၁၀၀ ကိုလည်းအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်နိုင်လိမ့်ဦးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Christian Gilberti ၏ Did you know this year marks the 100th anniversary of Yangon University? အားမြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သငျသိပါသလား။ ၂၀၂၀ကရြငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ နှဈ ၁၀၀ပွညျ့ပွီဆိုတာ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၉၉နှဈ ဒီဇငျဘာလမှာရနျကုနျတက်ကသိုလျကြောငျးသားတှဟော ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုလုပျဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ဗွိတိသြှတှရေနျကုနျတက်ကသိုလျကိုမဖှငျ့လှဈခငျက မွနျမာကြောငျးသားတှဟော တက်ကသိုလျအဆငျ့ပညာသငျခငျြရငျ ကာလကတ်တားနဲ့လနျဒနျကိုသှားကွရတယျ။
ဗွိတိသြှတှဟောမွို့ထဲနဲ့အလှမျးဝေးတဲ့ ဗဈတိုးရီးယားကနျ (အခု အငျးလြားကနျ) နဲ့ ပရုံးလမျး (အခု ပွညျလမျး) တို့ကွားမှာ ရနျကုနျတက်ကသိုလျကိုဖှငျ့လှဈပေးခဲ့တယျ။ ဒီနရောက ကြောငျးသားတှစေုပွီးသပိတျမှောကျခဲ့ရငျ အစိုးရအတှကျထိနျးသိမျးရလညျးလှယျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့မွနျမာကြောငျးသားတှကေတော့ အောကျဈဖို့ဒျတက်ကသိုလျကိုအခွခေံပွီးဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာအထကျတနျးစားတှကေိုဦးစားပေးလှနျးတယျ၊ သာမနျလကျလုပျလကျစား ပွညျသူတှအေနားမကပျနိုငျအောငျဈေးကွီးလှနျးတယျလို့ ဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။ သငျရိုးတှကေလညျး ဗွိတိသြှကိုလိုနီအုပျခြုပျရေးယန်တရားကိုအထောကျအပံ့ဖွဈဖို့ရေးဆှဲထားတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
ကြောငျးသားအမြားစုကသပိတျမှောကျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျကွပွီး ရှတေိဂုံဘုရားမှာစုဝေးခဲ့ကွတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာဗမာစာနဲ့ယဉျကြေးမှုကိုအဓိကထားသငျတဲ့အမြိုးသားကြောငျးတှဖှေဲ့စညျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျကွပါတယျ။ အခု ဒဂုံ (၂) ကြောငျးဟာတခြိနျက မွို့မအမြိုးသားပညာရေး အထကျတနျးကြောငျးပါ။
အမြိုးသားကြောငျးတှစေတညျထောငျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့နကေို့ဂုဏျပွုတဲ့အနနေတဲ့ ဒီဇငျဘာလ ၉ရကျနကေို့အမြိုးသားနအေ့ဖွဈသတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျကစပွီးရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာ မွနျမာနိုငျငံနိုငျငံရေးအပွောငျးအလဲတှရေဲ့မွဈဖြားခံရာဖွဈလာခဲ့တယျ။
၁၉၂၀၀နျးကငျြမှာ တက်ကသိုလျကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂကနေ အမြိုးသားခေါငျးဆောငျအမြားအပွား ထှကျပျေါလာခဲ့တယျ။ ဒီသခငျနိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတှဟော မွနျမာနိုငျငံလှတျလပျရေးရဖို့ ဗွိတိသြှတှကေိုဦးဆောငျတျောလှနျခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီခတျေကရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာ အာရှမှာအကောငျးဆုံးဖွဈပွီး ရှေးဟောငျးသုတသေနပညာရှငျ G H Luce၊ ဘာသာဗဒေပညာရှငျ ဦးဖမေောငျတငျ၊ ဘောဂဗဒေပညာရှငျ J S Furnivall တို့လိုပါမောက်ခတှေ သငျကွားပေးရာတက်ကသိုလျလညျးဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး၊ ဗိုလျခြုပျနဝေငျး၊ စာနယျဇငျးလောကထဲကထငျရှားသူ ဒျေါခငျမြိုးခဈြ၊ ကဗြာဆရာမငျးသုဝဏျ၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ ပညာရသေောကျစို့ရာနရောလညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တက်ကသိုလျရဲ့အထငျရှားဆုံးအဆောကျအဦကတော့ ၁၉၂၇ကတညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာ စာပနေဲ့အနုပညာနယျပယျမှာလညျး ထငျရှားပွီး သူ့ရဲ့လှမျးမိုးမှုကို ဆရာမ မိုးမိုး(အငျးလြား) ရဲ့ဝတ်ထုတှကေနေ ထူးအိမျသငျရဲ့ဂပျြဆငျထိပျကလရိပျပွာသီခငျြးအထိတှနေို့ငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာ့သမိုငျး နှဈ ၁၀၀ အတှငျးထငျရှားတဲ့ဇာတျကောငျတကောငျလညျးဖွဈခဲ့တယျ။ ၁၉၄၅ အောကျတိုဘာ ၂၄ မှာ ဂပြနျဗိုလျခြုပျ Heitaro Kimura ဟာရနျကုနျတက်ကသိုလျမှာပဲ မဟာမိတျတပျတှကေိုလကျနကျခကြွောငျးကွညောခဲ့ပါတယျ။
၁၉၆၂ ဇူလိုငျ ၇ရကျနမှေ့ာ ဗိုလျခြုပျနဝေငျးရဲ့စဈသားတှဟောရနျကုနျတက်ကသိုလျထဲဝငျရောကျပွီး ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒထုတျဖျောနတေဲ့ကြောငျးသားထုကိုအကွမျးဖကျနှိမျနငျးခဲ့ပါတယျ။ အငျးလြားဆောငျက ကြောငျးသူတှဟောတက်ကသိုလျအဝငျဝမှာ စဈသားတှကေိုနာမျနှိမျတဲ့အနနေဲ့ ထဘီတှကေိုလှမျးထားခဲ့တယျ။ ဒီဖွဈရပျမှာ ကြောငျးသားမြားစှာသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ နောကျတနမေ့နကျမှာပဲ ကြောငျးသားတခြို့ပုနျးခိုနတေဲ့သမဂ်ဂအဆောကျအအုံဟာ ဒိုငျးနမိုကျနဲ့ဖောကျခှဲဖကျြဆီးခံခဲ့ရပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ တက်ကသိုလျဟာအစိုးရလကျအောကျရောကျသှားပွီး အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့သငျကွားနရောကနေ မွနျမာဘာသာအဖွဈပွောငျးလဲလိုကျတယျ။ ဘာသာစကားပွောငျးလဲတာပွဿနာမရှိပမေယျ့ ပညာရေးအသုံးစရိတျလြှော့ခလြိုကျတာကတော့ သိသာတဲ့ထိုးနှကျခကျြတခုလို့ပွောရပါလိမျ့မယျ။
၁၉၇၄မှာ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျဟောငျး ဦးသနျ့ရဲ့ရုပျအလောငျးကို အစိုးရကကွံတောသင်ျခြိုငျးမှာမွှုပျဖို့စီစဉျခဲ့ပမေယျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျကြောငျးသားတခြို့က လကျမခံခဲ့ပါဘူး။
ဒီကြောငျးသားတှဟောဦးသနျ့ရဲ့အခေါငျးကိုခိုးယူပွီး ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမရဲ့ရှမှေ့ာမွှုပျနှံခဲ့တယျ။ ဦးသနျ့ရဲ့ဈာပနကိုလညျးနိုငျငံတျောအခမျးအနားနဲ့ဆောငျရှကျဖို့တောငျးဆိုခဲ့တယျ။
ကနျြရဈသူမိသားစုရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရရုပျကလပျကိုပွနျပေးခဲ့ပမေယျ့ နောကျထပျကြောငျးသားအုပျစုတစုကထပျခိုးသှားပွီး ယခငျကြောငျးသားသမဂ်ဂအဆောကျအအုံ နရောမှာဂူသှငျးသဂွိုဟျဖို့ကွိုးစားခဲ့တယျ။ ဒါဟာအစိုးရကိုအာခံတဲ့အပွုအမူလို့လညျးပွောလို့ရပါတယျ။
စဈတပျဟာကြောငျးသားတှကေိုအကွမျးဖကျလူစုခှဲပွီး ကနျတောငျမငျအမှတျတရပနျးခွံ (Kandawmin Mausolea) မှာမွှုပျနှံခဲ့ပါတယျ။
၁၉၈၈ ကြောငျးသားသပိတျရောကျတော့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာဆန်ဒပွကြောငျးသားတှနေဲ့ စညျကားခဲ့ပွနျတယျ။ ၁၉၉၀၀နျးကငျြခုနှဈတှမှော ရနျကုနျတက်ကသိုလျကိုခတ်ေတပိတျထားခဲ့ပွီး ကြောငျးသားတှဟောတခွားတက်ကသိုလျတှမှောပညာသငျကွရပါတယျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှာ ကြောငျးသားတို့သှေးမစှနျးထငျးခဲ့တဲ့နရောမရှိဘူးလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။
၂၀၁၂ ခုနှဈအရောကျမှာတော့ အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး ဘာရကျအိုဘားမားဟာ မွနျမာနိုငျငံကို လာရောကျလညျပတျခဲ့ပွီး သူပွောတဲ့မိနျ့ခှနျးထဲမှာ ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာရာစုနှဈတခုအတှငျး “မွနျမာကြောငျးသားတှရေဲ့လူ့အခှငျ့အရေးတောငျးဆိုရာမွေ” လို့တငျစားဂုဏျပွုခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတက်ကသိုလျပွနျလညျအသကျဝငျလာပွီး ကြောငျးသားသဈတှနေဲ့စညျကားလာခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတကာမှာလညျး ရနျကုနျတက်ကသိုလျရဲ့ အဆငျ့အတနျးသတျမှတျခကျြတှမွေငျ့တကျလာခဲ့တယျ။
ကြောငျးသားသမဂ်ဂသဈလညျးပွနျလညျပျေါထှကျလာခဲ့ပွီးသူ့ရှကေ့နောငျတျောကြောငျးသားတှရေဲ့ခွရောလိုကျလို့ မတရားမှုတှကေိုဆနျ့ကငျြခဲ့တယျ။ အသဈတဖနျနိုးထလာတဲ့ တက်ကသိုလျအတှကျ စိနျချေါမှုတှကေတော့ရှိနဆေဲပါ။ မှတျပုံတငျမရှိတဲ့လူနညျးစုတိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတကျခှငျ့မရတဲ့ပွဿနာတှကေိုရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခကျအခဲအမြိုးမြိုးကွားမှာ နှဈ ၁၀၀ တိတိမားမားမတျမတျရပျတညျခဲ့တဲ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျဟာ နောကျထပျနှဈ ၁၀၀ ကိုလညျးအောငျအောငျမွငျမွငျဖွတျကြျောနိုငျလိမျ့ဦးမယျလို့ယုံကွညျပါတယျ။
Christian Gilberti ၏ Did you know this year marks the 100th anniversary of Yangon University? အားမွနျမာဘာသာသို့ပွနျဆိုဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ။
Previous articleEvents & Promotions Guide
Next articleလာမယ့် ၁၀စုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းတွေ ကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့